शिव लिं-गलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको अचानक भयाे मृ-त्यु, एकपटक अवश्य पढ्नुहाेला – Wow Sansar
रेलवेको ट्रायक बनाउनका लागि मजदुरले जमिन खन्ने क्रममा एउटा शिव लिं- ग फेला पर्यो । शिवलिं- ग भेट्टाएपछि मजदुरले काम रोके र उक्त ट्रयाकका इन्जिनियर ब्रिटिश रोर्बट हेनरीलाई यो सबै कुरा भने । तर इञ्जिनियरले उक्त शिव लिं- गलाई ढुंगा मात्रै भएको भन्दै फोडेरै रेलवे ट्रयाक संचालनमा ल्याउने निर्णय गरे ।
घ`टना हो भारतको झारखण्डको गोइककेराको । झारखण्डमा अंग्रेजको शासन ताकाको समयका ति इञ्जिनियरले हिन्दु धर्ममा आस्था नराख्ने भएका कारण मजदुर र स्थानीयले शिवलिं- गको बारेमा सबै बताए पनि हातमा लिएर टुक्रा टुक्रा बनाइदिएको केही समयमा नै ति इञ्निियरको मृ- त्यु हुन पुग्यो । जसका कारण उक्त काम नै लथालिंग बन्यो । विज्ञानलाई समेत चुनौती दिएको घटनाका कारण सरकारले उक्त रेलवे ट्रयाक नै बदल्यो ।
जहाँ अहिले शिव मन्दिरको निर्माण गरिएको छ । महादेवशाल धाम नाम दिइएको उक्त मन्दिरमा अहिले दिनकै ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । सरकारले रेल्वेको रुट बदल्न पर्यो । अहिले त्यस स्थानमा मन्दिर बनाइएको छ र आज पनि पुजा आराधना हुन्छ । हाल यस मन्दिरको नाम महादेवशाल धाम हो, जुन झारखण्डको गोइककेरामा अवस्थित छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
याे पनि, माझी बस्ती ऋणमा डुवेकाे भन्ने श्वेता खड्काले किन झिकिन त निर्माणबाट हात, के सहयोग दिन्छु भन्नेहरुले दिए धोका दिएकैहाे त ! (भिडियाे हेर्नुस्)। नायिका श्वेता खड्काले माझी बस्तीबाट हात झिकेकी छन् । श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले५३ घर माझीका लागि एकीकृत बस्ती बनाउन लागेकी थिइन् ।
बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकी उनले करोडौँ खर्चेर विवाह र पार्टी गरेको तथा एक क्लवमा भएको झगडामा उनको उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । एकीकृत माझी बस्ती निर्माणको १५ जेठ २०७४ मा शिलान्यास गरेकी उनले नसकिदै बस्ती निर्माणबाट उनले हात झिकिसकेको खुलेको छ । निर्माण सम्पन्न नभएको माझी बस्ती ऋणमा डुबेको भन्दै यही माघ २० गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट नायिका श्वेताले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा अपील गरेकी थिइन् ।
Prevविश्व चकित हुने भिखारी : माग्दा माग्दै ११ करोड खातामा जम्मा भयो, आखिर वेवारिसे बनेर मरे !
Nextसपनाले पनि मुख खोलिन् : बिनय र सपनाको स’म्ब,न्धको वास्तविकता यस्तो